Lesona 5 nianarana avy amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa 30 tapitrisa mahery tamin'ny taona 2021 | Martech Zone
Tamin'ny taona 2015, izaho sy ny mpiara-manorina ahy dia nanapa-kevitra ny hanova ny fomba fifandraisan'ny mpivarotra amin'ny mpanjifany. Nahoana? Niova ifotony ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny media dizitaly, saingy tsy nivoatra niaraka tamin'izany ny varotra.
Hitako fa nisy olana lehibe amin'ny signal-to-noise, ary raha tsy misy marika loatra ny marika, dia tsy afaka mahazo ny mari-pamantarana ara-barotra izy ireo mba ho re amin'ny static. Hitako ihany koa fa nitombo ny tambajotra sosialy maizina, izay nahitana tampoka ny fampahalalam-baovao nomerika sy ny marika, saingy tsy afaka nanara-maso ny niavian'izany.
Inona no nipoitra teo ambonin'ilay static ka nisarika ny sain'ny mpanjifa? Hafatra. Mandefa hafatra isan'andro ny olona rehetra, saingy tsy noraharahian'ny marika io fantsona io — izay manimba azy ireo. Tianay ny hanampy ireo marika hisarihana ny sain'ny mpihaino azy amin'ny fomba vaovao, ka nanomboka izahay Spectrm ho fomba iray hanaterana ny fanaterana votoaty tsirairay amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra amin'ny fampiharana izay lanin'ny olona ny fotoanany, ary mba hahatonga ireo marika miresaka amin'ny mpanjifa, tsy at azy ireo. Tsapanay haingana fa fantsona ara-barotra tsy voavaha tanteraka ity izay namaha ireo fanamby rehetra ireo ho an'ny marika mpanjifa an-tserasera.
Dimy taona taty aoriana, nianatra zavatra betsaka momba ny varotra fifampiresahana izahay, ary tamin'ny taona 2021 fotsiny, dia nahafahanay nifanerasera tamin'ny mpanjifa 30 tapitrisa mahery ho an'ny mpanjifanay. Ity ny zavatra nianarantsika tamin'ny fanampiana ny mpanjifa hanomboka sy hankafy ny paikadin'izy ireo amin'ny fandefasan-kafatra manokana, ary ny fomba ahafahan'ny fifandraisana mivantana amin'ny mpanjifa mamorona ny traikefa manokana tadiaviny.
Lesona dimy nianarana momba ny fanatsarana ny fandefasana hafatra mandeha ho azy
Nianatra zavatra betsaka izahay tamin'ny fanampiana ireo marika Fortune 100 hamolavola sy hamolavola chatbots ara-barotra izay tsy vitan'ny hoe misarika ny mpanjifa fa mivadika ho varotra. Ireto misy fomba vitsivitsy ahafahanao mamorona paikady fandefasana hafatra mandeha ho azy mahomby, ary nahoana izany no zava-dehibe.
Lesona 1: Atombohy amin'ny Hook
Io foana no fanontaniana lehibe indrindra amin'ny mpivarotra iray: Ahoana no fomba hisarihana ny sain'ny mpihaino ahy, ary ahoana no hifandraisako manokana kokoa sy hanolotra zavatra izay hahatonga azy ireo hirotsaka? Voalohany, mamoròna fihokoana mahasarika izay mamely ireo teboka mamaha ny fanaintainanao ary nahoana izy ireo no tokony hifanerasera amin'ny chatbot anao. Inona no sanda ho azon'izy ireo avy amin'ny traikefa? Tantano ny zavatra andrasany momba izay ho azony avy amin'ny traikefa. Avy eo, ampiasao kopia valiny mivantana izay mitarika ny mpanjifanao amin'ny fifanakalozana amin'ny hetsika.
Nahoana no zava-dehibe izany? Ny mpihaino anao dia reraka amin'ny ezaka ara-barotra nomerika hitany isan'andro. Tsy vitan'ny hoe maniry zavatra hafa izy ireo fa hifidy marika izay manolotra traikefa mahasoa sy ilaina. Ny angonay dia mampiseho fa ny traikefa izay mampita mivantana ny lanjan'ny traikefa ary mitarika ny mpanjifa mandritra ny dia miaraka amin'ny valiny atolotra dia manana fifandraisana matanjaka kokoa sy fampisehoana fiovam-po.
Lesona 2: Omeo toetra matanjaka ny Chatbot anao
Ny mpanjifanao dia afaka milaza raha mifanerasera amin'ny bota tohanan'ny teknolojia ratsy izay mijanona raha toa ka apetraka amin'ny fanontaniana hoe "tsy misy soratra." Tsy vitan'ny hoe mahasarika ny botanao ihany no zava-dehibe, fa ny mampiasa ny angona momba ny resakao mba hahatonga azy ireo ho marani-tsaina kokoa sy handray andraikitra bebe kokoa. Omeo toetra mifanaraka amin'ny feon'ny marikao ny botanao, ataovy mahasarika azy, ary ampiasao emojis, sary, na gif mihitsy aza rehefa miresaka.
Nahoana no zava-dehibe izany? Na dia fantatr'izy ireo aza fa mifandray amin'ny chatbot izy ireo, ny mpanjifa dia te hifanerasera amin'ny sehatra manokana amin'ireo marika tiany. Rehefa mandefa hafatra amin'ny namany izy ireo, ny hatsikana, ny sary, ny .gifs, ary ny emojis dia tafiditra ao anatin'izany fifandraisana ifandrimbonana izany. Ny angonay koa dia mampiseho fa ny marika manana toetra bot matanjaka sy famoronana chat mahafinaritra dia manana fifandraisana matanjaka indrindra.
Lesona 3: Araho ny resakao
Ny fifandraisan'ny mpanjifa ihany koa dia maka angon-drakitra betsaka ihany koa. Apetraho ao am-pon'ny paikadin'ny fifampiresahanao ny fanaraha-maso sy ny tatitra momba ny fiovam-po, fa manaova fomba fiasa feno amin'ny fanomezan-toky izay manome antoka fa mandrefy tsara ny fiantraikan'ity fantsom-barotra vaovao ity ianao.
Telekom nanana tahan'ny fiovam-po 9x mifanohitra amin'ny fampielezan-kevitry ny fifamoivoizana amin'ny tranokalany.
Purple nahazo fiverenana 4x tamin'ny fandaniana doka.
Amin'ny fampiasana hafatra manokana, Ford nanana fampiakarana 54% amin'ny fiheverana ary fiakarana 38% amin'ny fikasana hividy - samy ambony noho ny mari-pamantarana indostrian'ny fiara.
Nahoana no zava-dehibe izany? Ny fanovana ny fitsipika momba ny fiainana manokana sy ny cookies dia mametra ny fomba ahafahan'ny mpivarotra manara-maso ny hetsika dokambarotra nomerika. Ny marketing amin'ny fifampiresahana dia tsy vitan'ny hoe manome fantsona iray ahafahanao manangona angon-drakitra nambara mivantana avy amin'ny mpanjifanao, fa teboka iray azo arahina mba hanampiana anao hahatakatra ny ROI manontolo. Ary koa, ny traikefanay miaraka amin'ny mpanjifa dia ny nahafahan'izy ireo nanararaotra ny fifampikasohana amin'ny chat sy ny fiovam-po an-tranonkala mba hanamafisana ny fantson-dry zareo.
Lesona 4: Mandehana foana
Satria tsy eo amin'ny findainy fotsiny ny mpanjifa mandritra ny ora fiasanao, ny fandefasana hafatra mandeha ho azy dia azo atao foana mba handraisana ny mpanjifa amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro. Fananganana an foana-on Ny paikadin'ny varotra fifampiresahana dia mampiseho amin'ny mpihaino anao fa misy anao ho azy ireo.
Izany no ambaran'ireo namaly tamin'ny tatitra nataonay momba ny Fanjakan'ny varotra fifampiresahana ara-tsosialy. Hitanay fa ny antony roa voalohany hifandraisan'ny olona amin'ny marika amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasana hafatra dia satria mora kokoa izany satria afaka misafidy ny fotoana handraisana anjara izy ireo, ary haingana kokoa izany.
Fa ny hoe mandeha foana dia tsy hoe mahafeno ny zavatra andrasan'ny mpanjifa fotsiny. Mikasika ny fieritreretana mihoatra ny fampielezan-kevitra. Ny fananana paikady ara-barotra amin'ny resaka fifampiresahana hatrany no hany fomba hampitomboana tsy tapaka ny sandan'ny hafatra ho toy ny fantsona.
Nahoana no zava-dehibe izany? Ireo marika izay mampiasa fomba fanao amin'ny fotoana fohy, mifantoka amin'ny fampielezan-kevitra dia mety hahita fiverenana kely, saingy amin'ny farany dia ho resy amin'ny marika manao fomba fiasa hatrany. Tahaka ny fantsom-barotra rehetra, ny fandefasana hafatra dia tokony hohatsaraina hatrany mifototra amin'ny angona azonao amin'ny chat. Ny fampiasana fomba fiasa lalandava izay mandanja ny hafatra amin'ny sehatra rehetra dia ahafahanao mamorona sanda lehibe indrindra mandritra ny fotoana maharitra. Nahoana? Manorina mpihaino azo tratrarina mivantana amin'ny fantsona fandefasana hafatra azonao idirana indray ianao mba hampitomboana ny sandan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany. Ianao koa dia manatsara ny resaka AI mifototra amin'ny angon-drakitra momba ny hafatra azonao avy amin'ny mpanjifa.
Lesona 5: Ampiasao ny angon-drakitra nambara mba handraisana anjara tsara kokoa
Ny angon-drakitra voaangona avy amin'ny fifaneraserana amin'ny mpanjifa, miaraka amin'ny angon-drakitra fanentanana doka sy famakafakana tranokala, dia afaka mandray anjara amin'ny ezaka ara-barotra amin'ny ankapobeny. Tsy vitan'ny hoe afaka manampy anao hahatakatra bebe kokoa ny mpihaino anao sy ny zavatra ilainy izy io fa afaka manampy anao hizara tsara kokoa ny mpihaino anao, ary hanao manokana ny fomba hampandraisanao azy ireo indray amin'ireo fantsona fandefasana hafatra ireo.
Nahoana no zava-dehibe izany? Asehon'ny angonay fa ireo marika mampiasa angona nambara voaangona tamin'ny resaka dia afaka mamorona fizarana tena kendrena mba hidirana indray amin'ny fantsona fandefasana hafatra, ka miteraka fiovam-po matanjaka kokoa. Fampandrenesana fampandrenesana ho an'ny tena manokana amin'ny fampiharana toa ny Messenger get 80% ny tahan'ny misokatra ary 35% ny tahan'ny clickthrough eo ho eo. Lehibe izany raha oharina amin'ny fantsona toy ny mailaka, izay heverina ho fantsona fihazonana tsara indrindra. Ankoatra izany, 78% ny mpanjifa dia milaza fa mety hanao fividianana hafa amin'ny mpivarotra iray izy ireo raha toa ka mikendry ny tombontsoany sy ny filany ny tolony.
Ny hafatra dia ny ho avin'ny Marketing
Ny fomba fiasa tsara kokoa amin'ny varotra fifampiresahana dia amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra mandeha ho azy amin'ny fampiharana iray izay mandany ny fotoanany ny mpanjifanao. Izany no hamela anao ho lasa mozika eo amin'ny fiainan'ny mpanjifanao, fa tsy ampahany fotsiny amin'ny marika hafa ao ambadika.
Ampidino ny tatitra momba ny varotra momba ny resaka sosialy an'ny Spectrm
Tags: aifandefasana hafatra mandeha ho azytsara indrindraBotfomba fanao tsara indrindra amin'ny chat botfifandraisana amin'ny chatfifandraisana amin'ny chatbotchatbotsresaka marketingpaikady ara-barotra amin'ny fifampiresahanaresakafiovam-ponyfifandraisan'ny mpanjifaangona nambaraemojiEmoticonslesona nianaranafianarana milinahafatraapp messagingfampiharana fandefasan-kafatrany fiainana manokanaPurpletatitraspecrmtoetry ny varotra fifampiresahana ara-tsosialytlekom
Max no mpanorina sy CEO ny Spectrm - ny sehatra automation marketing amin'ny resaka tsy misy kaody ho an'ny marika hanovana ny mpanjifa amin'ny fikarohana, sosialy ary fampisehoana. Spectrm chatbot analytics, vahaolana automatique amin'ny varotra ary AI resaka dia manamora ny fandrindrana ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny ambaratonga.